अन्तरघातको राजनीति « Loktantrapost
३० असार २०७४, शुक्रबार १६:२१
लामो समयको अन्तरालपछि भएको स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया सकिएर मत गणना कार्य पनि उत्तरार्धमा चलिरहेको छ । त्यसैले सबैको ध्यान मत गणना स्थलतर्फ तानिएको छ । मत परिणाम आउँदै गर्दा भने एउटा शब्द निकै चर्चित भएको छ, त्यो हो अन्तरघात । आफ्नै पार्टी भित्रका व्यक्तिहरुले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट नहाली अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हालेर आफ्नो पार्टीलाई दिएको धोखालाई अन्तरघात भन्ने आम मानिसहरुको बुझाई रहेको छ । किन आज यो शब्द यति धेरै चर्चित भयो त ? यसको कारण र परिणाम खोज्न दलहरुले अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।
करिब १८ वर्षपछि भएको स्थानीय निकायको चुनावलाई आफूसँगै सिधै जोडिने र सङ्घीय संरचना अनुसार अत्यन्तै धेरै जिम्मेवारी स्थानीय निकायले पाएकाले पनि सर्वसाधारण जनताले यो चुनावलाई यति धेरै महत्व दिएका छन् । जसकारण विगतमा कुनै पार्टीले लामो समय जितेर बनाएको किल्लालाई अर्को पार्टीले तोडिदिएको छ । अर्थात, कुनै ठाउँ विशेषमा रहेको कुनै पार्टीको वर्चस्व यसपटकको चुनावमा खोसिएको छ । आफ्नो वर्चस्व खोसिएपछि धोका पाएको र दिएको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरु आक्रोसित भएका हुन् र छन् ।
यो अन्तरघात भन्ने शब्दले दुईवटा कुराको सङ्केत गर्दछ । जनताले सदैव मन परे पनि नपरे पनि एउटै पार्टीलाई भोट हाल्नु पर्ने या आफूले इच्छाएको व्यक्ति वा पार्टी जसले आफ्नो ठाउँ या देशको हित गर्दछ उसलाई भोट दिनुपर्ने ? राजनीतिक दलको भावनाअनुसार पार्टीले जोसुकै व्यक्ति उठाए पनि जनताले उसैलाई भोट दिउन् भन्ने रहेको छ । उसले पार्टीलाई योगदान दिएको होस् या नहोस्, जनताको भावना बुझ्ने खालको होस् या नहोस्, पपुलर होस् या नहोस्, ठूला नेतालाई दाम राखेर टिकट ल्याएको होस् या आफन्त वा निकटस्थ भएकै कारणले टिकट पाएको नै किन नहोस् । तर, लोकतन्त्रमा सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको जनताको कुरा भने राजनीतिक नेतृत्वले टिकट दिँदा आफ्ना निकटतम्लाई मात्र नभएर व्यक्तिको व्यक्तिगत क्षमता, पार्टीगत योगदान, लोकप्रियता, जात, धर्म, लिङ्गलगायतका सबै पक्षलाई समेटेर टिकट वितरण गरिएको खण्डमा भोट दिने हो नत्र उम्मेद्वार मध्ये आफूलाई जो ठिक लाग्छ उसैलाई दिने हो भन्ने जनताको कुरा हो । त्यसैले टिकट वितरण गर्दा नेताजीहरुले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ अन्यथा मनोमानीको फल जनताले दिई हाल्छन् भन्ने पाठ यस पटकको स्थानीय निकायले सिकाएको छ ।
दलगत वा व्यक्तिगत स्वेच्छाचारितालाई जनताले मन नपराएर नै यसपटक किल्लाहरु तोडिएका छन्, भत्किएका छन् । काङ्ग्रेसको सदैव प्रभाव रहेको क्षेत्रमा एमाले अगाडि आएको छ भने एमालेको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा काङ्ग्रेस अगाडि आएको छ । त्यसैले पनि नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीभित्रै अन्तरघात भयो भनेर रोइलो गरिरहेका छन् । तर, जनता जान्न चाहन्छन् कि के जनताले आफूले रोजेको प्रतिनिधि छान्न नपाउने ? के जनता सदैव पार्टीको हनुमान भइरहनु पर्ने ? निश्चय नै मतदान गर्ने विषयमा जनताले पटक–पटक सोच्नु पर्छ । उसले स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नुपर्छ ताकि आफूले दान गरेको मतले खराव नतिजा ननिकालोस् । आफूले गरेको मतदानले देश र जनताको हित गरेस् । यदि त्यसो नगरेर हाम्रोलाई होइन, राम्रोलाई भोट दिने नाममा २÷४ केजी मासु र २÷४ हजार रुपैयाँमा नबिकियोस् ।
अहिले पनि नेताजीहरु जनतालाई खरिद विव्रmी हुने पशुको रुपमा हेर्छन् र चुनावको अघिल्लो दिन मासु र पैसा बोकेर गाउँ–गाउँ पसेर भोट माग्छन् । नेताजीहरु जाँदै गर्दा जनताले भोट दिन्नाँै भन्दैनन् र मासु र पैसा खाइदिन्छन् । तर, भोट भने इच्छा गरेकै ठाउँमा हाल्छन् । दलहरु मासु र पैसा बाँडेर किनेको भोटलाई आफ्नो सम्झिएर गणना गर्छन् र गणना नपुग्दा त्यसलाई अन्तरघात भयो भन्दै डुक्रिन्छन् । यो सर्वथा गलत हो । आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नु उनीहरुको अधिकार हो । यदि दलहरु अन्तरघात नहोस् भन्ने चाहन्छन् भने जनताले इच्छाएको प्रतिनिधिलाई टिकट दिनुपर्छ न कि आफ्ना निकटवर्ती कार्यकर्ता वा आफन्तहरुलाई ।
अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई शक्तिकेन्द्रको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ । तर, २१ औँ शताब्दीका जनता शक्तिकेन्द्र आफूलाई ठान्छन् र आफ्नो शक्ति चुनावका बेला प्रयोग गर्छन् जसले नेतृत्वको शक्तिको अहमतलाई छताछुल्ल पारिदिन्छ । आज जनता के ठिक के बेठिक छुट्याउन सक्ने भएका छन् । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई हनुमान ठान्नु भन्दा पनि शक्तिकेन्द्र ठान्नु पर्दछ । जनतालाई शक्तिकेन्द्र ठान्न नसक्नुको परिणाम हो यसपटक दलहरुले भनेको अन्तरघात । जुन जनताले गरेको सही निर्णय हो । तर, राजनीतिक दलले पचाउन नसकेको मात्र हो ।
तर कोही व्यक्ति सदैव पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्छ । पार्टीको व्रिmयाशील सदस्य हो । पार्टीको विभिन्न पदमा बसेको छ तर भोट भने अरुलाई नै दिन्छ भने उक्त व्यक्ति अन्तरघाती नै हो । पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्न जरुरी हुन्छ । विशेषतः पार्टीलाई कार्यकर्ता भोट हाल्न र आवश्यक परेको बेला परिचालित हुनु हो । तर, आफूलाई व्यक्तिगत रुपमा मन नपरेको व्यक्ति उठ्दैमा ऊ परिचालित पनि हुँदैन र भोट पनि हाल्दैन भने ऊ अन्तरघाती नै हो । पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा राखेर पार्टीको आयतन मात्र बढाउनुभन्दा दार्शनिक एन्जल्सले भनेझैँ सीमित तर बफादार कार्यकर्ता राखेर पार्टी चलायो भने अन्तरघात हुने डर कम हुन्छ । यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्व चनाखो हुनु जरुरी छ ।